पछिल्ला कृयाकलाप | हाम्रो गाउ : प्यारो रत्नेचौर
भानु मा.वि. मा दशजोड संचालन गरिने
सीमा बोगटी (रत्नेचौरबाट फर्केर)
आज माघ २१ गते रत्नेचौर गा.वि.स वार्ड नं. १ स्थित श्री भानु माध्यमिक बिध्यालय रत्नेचौरको प्रांगण आयोजित आम भेलाले आगामी शैक्षिक सत्रबाट भानु मा.वि. मा दशजोड दुर्इको तह थप गर्ने सम्बन्धि छलफल भएको छ । भेलाले यथासिघ्र आयोजक समिति निर्माण गरी चन्दा संकलन तथा आर्थिक संकलनका लागि अन्य क्रियाकलापहरू संचालन गर्ने पनि निर्णय भएको छ ।